Mendrika Hasongadina Ireo Niharan-doza Noho Ny Ady Atao Amin’ny Zava-mahadomelina Ao Meksika, Fa Tsy Ry El Chapo Sy Sean Penn · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2016 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Català, Español
Teny anivon'ny media, niteraka tafiotra momba ny teotsaina entina manao gazety, izay nandevina ireo tokony ho ivon'ny tantara: ireo niharan-doza tamin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina, ny tafa nataon'i Sean Penn, Amerikàna mpilalao sarimihetsika (havia), tamin'ny mpitarika ny ‘cartel’ Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Joaquín “El Chapo” Guzmán, noraisina hatramin'ny fotoana tsy ela akory izao ho iray amin'ireo tena mpanondrana zava-mahadomelina nohazaina fatratra teto amin'izao tontolo izao, no mbola nibahana indray ny lohateny vaventy tao Meksika sy Etazonia — hatrany amin'ny toerana hafa teto an-tany — rehefa fanintelony voasambotry ny mpitandro filaminana tao Meksika indray ny 8 Janoary teo. Ankoatr'ireo fandosirany fonja nampientanentana tany aloha tany, ny famborahana ny fihaonany miafina fony izy mbola tany am-pandosirana tamin'i Sean Penn, mpilalao sarimihetsika sy Kate del Castillo, no nandrehitra indray ny tabataba ho mafy kokoa.
Lasa ireo telo ireo no kintan'ilay tantara, nangalatra ny fifantohan-tsaina tsy ho tamin'ireo izay tena mendrika izany: ireo niharan-doza tamin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina.
Noresahan'i Javier Sicilia, Meksikàna poety sady mpikatroka mafàna fo ny mikasika io tao anatin'ny tafa iray ho an'ny NBC News:
Toy ny setroka manakona ny endrik'i El Chapo. Voaafina ao ambadiky ny sarin'ilay mpitarika malaza, izay nomen'ny media sy ny politikan'i Meksika sy Etazonia voninahitra, ny tena fahamarinana… momba ireo maty sy ny an'ireo izay tsy mbola hita.
Marika famantarana [ny ady amin'ny zava-mahadomelina] i El Chapo izay ampiasain'ny governemanta mba fankasitrahana ny tenany ho nahazo fandresena iray tamin'ny ady amin'ireo ‘cartels’ -n'ny zava-mahadomelina sy ireo fikambanan-jiolahy manao heloka bevava voarindra… [saingy] tena hafa mihitsy ny zavamisy… Mitohy maty ny vahoaka. Mitohy manjavona ny vahoaka. Mitohy miaina anaty tahotra ny vahoaka… […]
Ny maripankasitrahana an'i Sean Penn ho nahavitra asa mendrika ny fanaovana gazety, sy ny teotsaina manahirana tamin'ny namelàna an'i Guzmán, mpitarika ny ‘cartel’ Sinaloa, ho afaka mankatoa ilay tafa alohan'ny hamoahana azy ho an'ny daholobe tao anatin'ny gazetiboky Rolling Stone no tena ivon'ireo tafiotra fanakianan'ny media. Tsy mba nisitraka velively fisarihana henjana ny sain'ny daholobe tahàka izao ireo matianina sy ireo olontsotra mpanao gazety izay mivarotra aina isanandro manao fandrakofana ny varotra an-tsokosoko zava-mahadomelina sy ny kolikoly ao Meksika. Tao anatin'ny taompolo farany, maherin'ny 80 ireo mpanao gazety nisy namono ary 17 ireo nanjavona araka ny voalazan'ny Reporters Without Borders – RSF.
Mahonena fa tsy mba nanontanian'i Sean Penn an'i #ElChapo ny mikasika ireo mpanao gazety nanjavona sy nisy namono, marobe tamin'ireny no niharan-doza noho ny fanafihan'ny ‘cartel’ mpikirakira zava-mahadomelina.
Mitovy amin'izany no azo ambara mahakasika ireo olon-tsotra 164.000 maty sy efa ho olona 22.000 nanjavona nandritry ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina, izay tsy isalasalàna fa i El Chapo no tena mpilalao fototra.
Anontanian'i @charlierose i Sean Pensky momba ny antony tsy nitafàny tamin'ny fianakavian'ireo niharan-doza izay maty novonoin'i El Chapo ankitsirano fotsiny izao
Mihanona fotsiny amin'ny fihinanana am-bolony ireo vontoaty tsy manaraka ny toetsaina takiana i @jacobnoori@CJR, namela ireo noharan-doza tamin'ny nataon'i El Chapo ho zava-maivana tsy mila asongadina. Ho anareo katsikana rehetra.
Ny mombamomba ny Rolling Stone dia manome fomba fijery mankasitraka amin'ny ankapobeny an'i Guzmán, tamin'ny filazàna fa nampiasa fotsiny ny herisetra izy rehefa “misy tombony ho azy,” “fa tsy toy ireo namany izay miditra amin'ny fakàna an-keriny sy famonoana fahatàny”. Raha ny momba ny sarin'ilay gangster nasianà fanatsaràna, nanoratra ilay mpanoratra sady mpanao gazety, León Krauze ao anatin'ilay lahatsoratra “El Triunfo de Joaquín Guzmán” (Ny Fandresen'i Joaquín Guzmán) ao amin'ny bilaoginy Letras Libres (Teny Malalaka):
Araka izany i El Chapo dia hita fa lehilahin'ny ankohonana, mpitsidika ary tia ny reniny, izay mikarakara ny zanany ary manonofy ny handany ny taona fisotroany ronono any amin'ny tranony any Sinaloa. Izay lasa mpikirakira zava-mahadomelina satria mba te-ho tafita amin'ny fiainana, izay tsy mahery setra raha tsy hoe miaro tena, izay tsy nanimba an'i Meksika. Mpivarotra zava-mahadomelina, toy ny hafa rehetra, izay tsy mandray zava-mahadomelina ary tsy misotro raha tsy hoe misy vehivavy manodidina eo, izay tsy mirona amin'ny fampiasàna herisetra na dia amin'ny fandosiana aza, ary izay “tsy mitady korontana na amin'ny fomba ahoana na ahoana”. Rangahy iray tia mamihina amim-pisakaizàna ary mitsiky amin'ny fotoana rehetra. Lehilahy tsara rehefa tsy resahana ireo famonoana olona an'arivony iampangàna ny ‘cartel’ Sinaloa sy ireo aina an-tapitrisa nopotehan'ny famarotana an-tsokosoko zava-mahadomelina tany amin'ny firenena 50 manerana izao tontolo izao.
Nilaza koa i IndyMama, mpampiasa Twitter hoe:
Izay olona rehetra matimaty (miankohoka) amin'i El Chapo dia tokony hahazo felaka iray farafahakeliny avy amin'ny fianakaviana sisa velona tamin'ireo niharan-doza
Mbola ela vao ho vita ny ady amin'ny heloka bevava voarindra ao Meksika, na dia tafaverina indray any anatin'ny fefy vy aza ny iray amin'ireo mpikirakira zava-mahadomelina isan'ny nikoizana indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tahaka izany koa ny olan'ny maha-olona ho an'ireo anjatony maro voatery nafindra monina ao anatiny ihany, izay tsy voajerin'ireo hetsika nataon'ny governemanta Meksikàna mba hahitàna an'i El Chapo ary tsy nampidirina tanaty kajikajy rehefa injay ny Filoha Enrique Peña Nieto nanambara hoe “Iràka tontosa”.
Iray amin'ireo olona nafindra toerana i Martha, izay tsy maintsy nandao ny tranony tao amin'ny vondrom-piarahamonina El Verano taorian'ny bemidina nataon'ny ‘marines’ Meksikàna tamin'ny 6 Oktobra, fony izy ireo nolazaina fa nikaroka ilay mpanao heloka bevava mbola any am-pandosirana. Tantarain'i Cadena Ser ao anaty fandaharan'ny fampielezampeo “Sin casa por El Chapo” (Tsy manana hialofàna noho i El Chapo) ny tantarany :
Natahotra ihany izahay satria ry zareo (marines) nandrahona anay, niteny taminay fa raha vao mivoaka ny tranonay izahay dia hotifirin-dry zareo, ary raha mandray ny fiaranay izahay dia mety ho darohany baomba, ary tsy tomponantoka amin'izay mitranga aminay ry zareo.
[…] nipetraka niaraka tamin'ireo fianakaviana sy nàmana izahay, saingy ny ankamaroany koa dia mpitsoa-ponenana anaty trano fialofana.
Tsy maintsy niala nandeha an-tongotra ireo olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina hafa, toa ny El Limón. Andro telo na efatra no lanin-dry zareo (hahatongavana tao Cosalá mba hialokaloka)
[…] babangoana ilay toerana fiompiana, matin'ny hanoanana ireo biby. Raha ny marina, rava ilay vondrom-piarahamonina.
Tsy nilaza karazana fanonerana mihitsy ny governemanta Meksikàna ho an'ireo olona toa an'i Martha izay namoy ny zavatra rehetra. Tetsy ankilany, nidehaka ny manampahefana ary nankalaza ny fahasamborana indray an'i Guzmán. Notsikerain'i Víctor Trujillo, mpanolotra fandaharana no sady mpilalao an-tsehatra, fantatra amin'ny filalaovany an'i “Brozo”, ilay olona manana toetra mahatahotra, ny fitondrantenan'ny filoha :
Tahaka ny tsy fahafahana mamela heloka ny fandosirana nataony, dia tsy ho hay avela koa ny fomba nankalazàn-dry zareo azy. Tian-dry zareo ho resaka maherifo ilay raharaha ka dia nohirain-dry zareo hatramin'ny hiram-pirenena mihitsy. Toy ny hoe hampitsahatra ho azy fotsiny izao ny herisetra iainan'ny firenena nandritry ny 20 taona ny fahazoana an'i “El Chapo” Guzmán.
Ao anatin'io tafa ho an'ny NBC News io ihany, nangataka an'i Sean Penn sy Kate del Castillo ilay mpikatroka mafàna fo, Javier Sicilia, mba hampiasàn-dry zareo ny làzany hilazàna ny tantaran'ireo niharan-doza, ary hoy izy nanampy :
[…] rehefa fantatra ny anaran'ireo maty novonoina, rehefa heno ny tantaran'ny fijalian-dry zareo, ary ampitomboin'ireo olona an'arivony, amin'izay ihany ny olona any rehetra any vao hikiaka hiantso fampitsaharana ny ady.